Realme 64MP Quad Camera Smartphone iji bido August 8 | Gam akporosis
Realme 64MP Quad Igwefoto Smartphone Na-amalite August 8
Anyị na-adịbeghị anya na-ekwu banyere Mkpa igwefoto igwefoto dị taa. Nke a bụ ihe, na karia, ga-eburu ike karịa, nke mere OEM anaghị echekwa na nyocha na mmepe nke igwefoto igwefoto dị mma maka ekwentị ha.
Realme bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-ebili n'oge ahụ. A zụlitere ya n'okpuru obi Oppo, ụlọ ọrụ nne na nna nke o si na ya pụta wee ghọọ ụdị siri ike na nke onwe ya na ọnụnọ n'ọtụtụ mba ma na-ezube ịbawanye gburugburu ụwa. Ọ nọ na-agbakwunye ọtụtụ ọnụ ahịa n'ahịa ahụ, n'oge na-adịghịkwa anya, n'ihe gbasara ụbọchị ole na ole, ọ ga-etinye onye ọzọ na tebụl, nke ga-abata na usoro nke igwefoto azụ anọ, nke isi ihe mmetụta ga-abụ, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị, 64 megapixels nke mkpebi.
A maara Realme ka ọ na-arụ ọrụ na ekwentị nwere igwefoto 64 MP, mana atụpụtara na ọ ga-apụta n'etiti ndị mmadụ ma emesịa ọ bụghị naanị ụbọchị isii, mana Onye isi ụlọ ọrụ Realme Madhav Seth gosipụtara iji nye anyị ụbọchị mbido gọọmentị, nke bụ August 8.
Anyị na-ewere a itu ukwu na smartphone igwefoto na 8th August na anyị na-eme ya ebe a na India. Jikere ka anyị na-ekpughere 64MP Quad Igwefoto mbụ nke ụwa na ama ama na ihe omume ọhụụ igwefoto anyị. Nke a bụ otu n’ime ihe ịtụnanya mbụ nke oge a. Nọrọ na-ekiri! #LeapToQuadCamera https://t.co/kSUMacQ9TI
- Ugwunna Ugwem August 2, 2019
Companylọ ọrụ a ga-ewepụta ụdị ọhụụ n’otu ihe omume na New Delhi, India, ka ọ bụrụ onye mbu ama ama n’uwa weputara ya na igwefoto 64MP. Nke a, na mgbakwunye, ga-enwe igwefoto igwefoto dị okpukpu anọ, bụ nke onye na-enwe obi ụtọ na nke akpọrọ aha ya ga-ahụ maka ịme isi ihe.
O doro anya na ngwaọrụ ahụ ga-ejikwa oghere dị nwayọ nwayọ na lens telephoto, yana igwefoto raara onwe ya nye iji weghara ihe omuma banyere ihe ojoo, iji mezue quartet. Banyere atụmatụ ndị ọzọ na nkọwapụta nke ekwentị, ọ nweghị ihe anyị nwere ike ijide. Na August 8 anyị ga-amata ha niile, ee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme 64MP Quad Igwefoto Smartphone Na-amalite August 8
E gosipụtara ọnụahịa Galaxy Tab S6 na Europe
Na-emikpu onwe gị na ahụmahụ post-apocalyptic nke Bad 2 Bad: mkpochapu